Njem ụbọchị na Salzburg si Vienna
Njem ụbọchị na Salzburg
Njem nri Prague
Corpus Christi dị na Austria
Ụzọ Hiking Karst
Na Neustadt nke Salzburg, nke a na-akpọ Andräviertel, nke dị n'ebe ugwu nke ubi Mirabell, e nwere ebe a na-ekpo ọkụ, nke a na-eme ka ọkpụkpụ, nke a na-akpọ Kurpark, bụ ebe e kere ohere gburugburu Andräkirche mgbe e kpochapụrụ nnukwu bastions mbụ. . Ogige spa nwere ọtụtụ osisi ochie dị ka oyi na okpomọkụ linden, cherry Japanese, robinia, osisi katsura, osisi ụgbọ elu na maple Japanese.
Ụzọ ụkwụ a raara nye Bernhard Paumgartner, bụ onye a ma ama site na akụkọ ndụ ya banyere Mozart, na-aga n'akụkụ ókèala ya na obodo ochie wee jikọta Mariabellplatz na ọnụ ụzọ si Kurpark ruo obere ala ala, akụkụ ugwu nke Mirabell Gardens. Agbanyeghị, tupu ịbanye n'ubi ị nwere ike buru ụzọ chọta ụlọ mposi ọha.
Ọ bụrụ na i lere Salzburg n'elu, ị ga-ahụ na obodo ahụ dị n'osimiri ma na-agba ya n'akụkụ abụọ site na obere ugwu. N'ebe ndịda ọdịda anyanwụ site na arc nke okirikiri nwere Festungsberg na Mönchsberg na ndịda ọwụwa anyanwụ site na Kapuzinerberg.
Ugwu ahụ ewusiri ike, Festungsberg, bụ nke dị na nsọtụ ugwu nke Salzburg Pre-Alps ma mejupụtara nke ukwuu nke Dachstein limestone. Mönchsberg, Ugwu Monks, nwere conglomerate ma jikọọ na ọdịda anyanwụ nke ugwu ewusiri ike. Salzach Glacier adịghị dọkpụrụ ya n'ihi na ọ na-eguzo na ndò nke ugwu ewusiri ike.
Kapuzinerberg, n'akụkụ aka nri nke osimiri ahụ dị ka ugwu e wusiri ike, bụ nke dị na nsọtụ ugwu nke Salzburg Limestone Pre-Alps. Ọ na-enwe ihu nkume ndị kpọdara akpọda na krest sara mbara ma bụrụ nke ihe mejupụtara ya bụ limestone Dachstein nwere akwa akwa na nkume dolomite. Mmetụta nchacha nke Salzach Glacier nyere Kapuzinerberg ọdịdị ya.
Ụlọ mposi ọha na Mirabell Gardens Square na Salzburg
Ogige Mirabell na-abụkarị ebe mbụ ị ga-aga na njem ụbọchị na Salzburg. Ụgbọ ala na-erute Salzburg City mere ka ndị njem ha budata T-nkwụsị nke Paris-Lodron Street na Mirabell Square na Dreifaltigkeitsgasse, ọdụ ụgbọ ala n'ebe ugwu. Na mgbakwunye, e nwere ebe a na-adọba ụgbọala, CONTIPARK Parkplatz Mirabell-Congress-Garage, na Mirabell Square ebe adreesị ya bụ Faber Straße 6-8. Nke a bụ njikọ ahụ iji google maps were banye n'ọdụ ụgbọ ala. Naanị gafee okporo ụzọ na Mirabell Square nọmba 3 enwere ụlọ mposi ọha na-akwụghị ụgwọ. Njikọ a na google maps na-enye gị kpọmkwem ebe ụlọ mposi ọha iji nyere gị aka ịchọta ya na okpuru ulo nke ụlọ dị n'okpuru ndò na-enye osisi.
Unicorn na Salzburg Mirabell Gardens
Otu steepụ mabụ neo-baroque, na-eji akụkụ nke balustrade sitere na ụlọ ihe nkiri obodo ahụ mebiri emebi na ihe oyiyi unicorn, jikọtara Kurgarten dị n'ebe ugwu na obere ala ala Mirabell Gardens dị na ndịda.
Unicorn bụ anụmanụ dị ka a ịnyịnya na a mpi n'egedege ihu ya. A na-ekwu na ọ bụ anụ ọhịa dị egwu, dị ike ma maa mma, nke nwere ike ijide ya naanị ma ọ bụrụ na edobere nwa agbọghọ na-amaghị nwoke n'ihu ya. Unicorn na-amaba n'apata nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, ọ na-aṅụ ya, duru ya gaa n'obí eze. Ejiri steepụ teres ahụ dị ka ọkwa egwu na-awụli elu nke Maria na ụmụaka von Trapp nọ na ụda egwu.
Unicorns na nzọụkwụ na-aga ubi Mirabell
Abụọ ibu nkume unicorns, ịnyịnya na mpi n'isi ha, dina na ụkwụ ha na-eche "Musical nzọụkwụ", ọnụ ụzọ ámá nke ugwu n'ọnụ ụzọ Mirabell Gardens. Obere, ma ụmụ agbọghọ nwere echiche na-ekpori ndụ ịnya ha. Unicorns dị nnọọ mma na-edina ala n'elu steepụ ka ụmụ agbọghọ nwee ike ịzọ ụkwụ na ha ozugbo. Anụmanụ ọnụ ụzọ ámá yiri ka ọ na-akpali echiche ụmụ agbọghọ. Naanị dinta nwere ike ịrata unicorn na nwa agbọghọ na-amaghị nwoke dị ọcha. A na-adọta unicorn site na ihe na-enweghị atụ.
A na-elele ogige Mirabell site na "The Musical Steps"
Ogige Mirabell bụ ogige baroque na Salzburg nke bụ akụkụ nke UNESCO World Heritage Historic Center nke Obodo Salzburg. Onye isi Achịbishọp Johann Ernst von Thun nyere ọrụ nhazi nke ubi Mirabell n'ụdị dị ugbu a n'okpuru nduzi nke Johann Bernhard Fischer von Erlach. Na 1854 Emperor Franz Joseph meghere ọha na eze Mirabell Garden.
Ewubere Obí Mirabell na 1606 site n'aka onye isi-achịbishọp Wolf Dietrich maka Salome Alt ọ hụrụ n'anya. The "Baroque Marble Staircase" na-eduga na Marble Hall nke Mirabell Palace. Ihe steepụ ụgbọ elu anọ a ma ama (1722) dabere na nhazi nke Johann Lucas von Hildebrandt. Ewubere ya na 1726 site n'aka Georg Raphael Donner, onye na-ese ihe kacha mkpa Central Europe nke oge ya. Kama ịwụ balustrade, a na-echekwa ya site na ihe nrụnye a na-eche n'echiche nke e ji C-arcs mee na volutu nwere ihe ịchọ mma putti.
Ogologo, nwere ntutu isi aja aja na-acha uhie uhie na anya isi awọ, Salome Alt, nwanyị kachasị mma n'obodo. Wolf Dietrich matara ya n'oge a na-eme mmemme n'ime ụlọ mmanya obodo na Waagplatz. N'ebe ahụ, e mere bọọdụ ndị ọchịchị obodo, a gwụkwara ihe omume agụmakwụkwọ. Mgbe a họpụtara ya dị ka Onyeisi Archbishọp Wolf Dietrich ọ gbalịrị inweta oge nke ọ ga-esi na ya nwee ike ịbụ onye ụkọchukwu ịlụ di na nwunye. N'agbanyeghị mbọ ọgbaghara nke nwanne nna ya, Kadịnal Marcus Sitticus von Hohenems, ọrụ a dara. Na 1606 o nwere Altenau Castle, nke a na-akpọ ugbu a Mirabell, nke e wuru maka Salome Alt, nke e mere na "Ville suburbane" nke Rome.
Pegasus n'etiti ọdụm
Bellerophon, dike kasị ukwuu na onye na-egbu anụ, na-agba ịnyịnya na-efe efe ejidere. Ihe kacha eme ya bụ igbu anụ ọhịa ahụ Chimera, aru ewu nwere isi ọdụm na ọdụ agwọ. Bellerophon nwetara ihu ọma nke chi dị iche iche mgbe ọ nwara ịnya Pegasus Ugwu Olympus isonyere ha.
Isi iyi Pegasus
Isi iyi Pegasus na Maria na ụmụntakịrị na-amali na ụda egwu mgbe ha na-abụ Do Re Mi. Pegasus, nke akụkọ ifo Chineke ịnyịnya bụ nwa nke Olimpik chi Poseidon, chi nke inyinya. N'ebe ọ bula inyinya nwere nkù tipuru ukwu-ya n'ala, isi-iyi di egwu nēwuputa.
Ọdụm na-echekwa Bastion'Steirs
Ọdụm nkume abụọ dina na mgbidi bastion, otu n'ihu, nke ọzọ dị ntakịrị elu na-ele anya na mbara igwe, na-echekwa ọnụ ụzọ site na obere ala ala ruo n'ogige bastion. E nwere ọdụm atọ na uwe agha nke Babenbergs. N'aka nri nke uwe agha steeti Salzburg bụ ọdụm ojii kwụ ọtọ tụgharịrị gaa n'aka nri na ọla edo na n'aka ekpe, dị ka uwe mkpuchi Babenberg, na-egosi ogwe ọlaọcha na-acha ọbara ọbara, ọta Austrian.
Zwergerlgarten, Ogige Dwarf Gnome
Ogige ahụ dwarf, nke nwere ihe ọkpụkpụ e ji nkume mabụ Ugwu Untersberg mee, bụ akụkụ nke ogige Baroque Mirabell nke Fischer von Erlach mere. N'oge baroque, ndị toro eto na ndị dị mkpụmkpụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọikpe Europe. E ji ha kpọrọ ihe n'ihi iguzosi ike n'ihe na ikwesị ntụkwasị obi ha. Ndị dwarves kwesịrị ịhapụ ihe ọjọọ niile.
Western Bosket nwere Ọwara Hedge
A na-egbutu “osisi” nke a na-ahụkarị nke ọma n'ogige Baroque Mirabell nke Fischer von Erlach. E ji axis kwụ ọtọ nke nwere oghere dị ka ụlọ nzukọ gafere osisi na ogige ndị ahụ. The bosket si otú kpụrụ a counterpart na nnukwu ụlọ na ya corridors, steepụ na Ụlọ Nzukọ na-ejikwa n'ụzọ yiri nke ahụ n'ime ime nke nnukwu ụlọ maka arụmọrụ nke ụlọ concerts na ndị ọzọ obere amusements. Taa n'ebe ọdịda anyanwụ bosket nke Mirabell Castle mejupụtara atọ n'ahịrị "ụzọ" oyi Linden osisi, nke na-na-na geometrically cube ekara udi site mgbe he, na Arcade na a gburugburu njiko trellis, na ọwara ogige Maria na ụmụntakịrị ha gbapụrụ ka ha na-abụ abụ Do Re Mi.
Uhie tulips na a baroque ifuru imewe na nnukwu ubi parterre nke Mirabell Gardens, ogologo nke a iji na ndịda na ntụziaka nke Hohensalzburg e wusiri ike n'elu ochie obodo n'aka ekpe nke Salzach. Ka emechara ihe gbasara Archdiocese nke Salzburg na 1811, Crown Prince Ludwig nke Bavaria tụgharịrị n'ogige ahụ n'ụdị ubi odida obodo Bekee ugbu a, ebe a na-echekwa akụkụ nke mpaghara baroque.
N'afọ 1893, e belatara mpaghara ogige ahụ n'ihi owuwu nke Salzburg Theatre, nke bụ nnukwu ụlọ dị n'akụkụ ndịda ọdịda anyanwụ. Ụlọ ihe nkiri nke Salzburg dị na Makartplatz bụ ụlọ ọrụ Viennese Fellner & Helmer, bụ ndị ọkachamara n'ịrụ ụlọ ihe nkiri, dị ka New City Theatre mgbe ụlọ ihe nkiri ochie, nke Prince Archbishop Hieronymus Colloredo wuru na 1775 kama ịbụ ụlọ ịgba egwu, kwesịrị. a ga-akwatu ya n'ihi ụkọ nchekwa.
Ihe ọkpụkpụ nke "Borghesi fencers" n'ọnụ ụzọ Makartplatz na-adabere na ihe ọkpụkpụ oge ochie sitere na narị afọ nke 17 nke dị nso na Rom na nke dị na Louvre ugbu a. Ihe oyiyi ogologo ndụ oge ochie nke dike na-alụso onye na-agba ọsọ ka a na-akpọ fencer Borghesian. A na-amata fencer Borghesian site na ọmarịcha mmepe anụ ahụ ya ma bụrụ otu n'ime ihe osise kachasị amasị na nka nke Renaissance.
Na 1694 Prince Archbishop Johann Ernst Graf Thun na Hohenstein kpebiri iwu ụlọ ndị ụkọchukwu ọhụrụ' maka kọleji abụọ ahụ ya na ụlọ ụka a raara nye Atọ n'Ime Otu, Dreifaltigkeitskirche, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ogige Hannibal n'oge ahụ, nke mkpọda. saịtị n'etiti ọnụ ụzọ ámá ochie na obí Mannerist Secundogenitur. Taa, ogige Makart, ogige Hannibal mbụ, bụ facade nke Holy Trinity Church nke Johann Bernhard Fischer von Erlach wuru n'etiti ụlọ kọleji, ụlọ ndị ụkọchukwu ọhụrụ'.
Ụlọ Mozart na Makart Square na Salzburg
Na "Tanzmeisterhaus", ụlọ no. 8 na Hannibalplatz, oghere na-ebili, obere, akụkụ akụkụ anọ dabara n'akụkụ ogologo axis gaa na Ụka ​​Atọ n'Ime Otu, nke ahagharịrị Makartplatz n'oge ndụ onye nka nke Emperor Franz Joseph I họpụtara na Vienna. Onye isi ịgba egwu ụlọ ikpe nwere nkuzi ịgba egwu maka Aristocrats, Wolfgang Amadeus Mozart na nne na nna ya bi n'otu ọnụ ụlọ nke mbụ site na 1773 ruo mgbe ọ kwagara Vienna na 1781, ugbu a ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na Getreidegasse ebe Wolfgang Amadeus Mozart mụrụ ghọrọ obere.
N'etiti ụlọ elu ndị na-apụta, facade nke Holy Trinity Church na-efegharị na concave n'etiti nke nwere windo gbara okirikiri nwere mkpịsị aka, n'etiti pilasters abụọ na nke a gosipụtara, jikọtara ogidi abụọ, nke Johann Bernhard Fischer von Erlach wuru site na 1694 ruo 1702. Ụlọ elu dị n'akụkụ abụọ na mgbịrịgba na elekere gables. N'elu ụlọ elu, uwe nke ogwe aka nke onye nchoputa na crook na mma agha, dị ka àgwà iconographic omenala nke Prince Archbishop Johann Ernst von Thun na Hohenstein, bụ ndị gosipụtara ma ike ime mmụọ ya na nke ụwa. The concave Central Bay na-akpọ onye na-ekiri ya ka ọ bịaruo nso ma bata n'ụka.
A na-ekewa tambour, njikọ, cylindrical, windo mepere emepe dị n'etiti ụka na dome, na nkeji asatọ nwere obere windo akụkụ anọ site na pilasters abụọ dị nro. Johann Michael Rottmayr mere fresco dome na gburugburu 1700 wee gosi nchichi nke Maria site n'enyemaka nke ndị mmụọ ozi dị nsọ, ndị amụma na ndị nna ochie.
N'elu ụlọ, e nwere tambour nke abụọ pere mpe nke nwere windo akụkụ anọ ahaziri ya. Johann Michael Rottmayr bụ onye na-ese ihe na mbụ Baroque na Austria. Johann Bernhard Fischer von Erlach ji ya kpọrọ ihe nke ukwuu, dị ka atụmatụ ya siri dị nke Onye Ọchịchị Achịbishọp Johann Ernst von Thun na Hohenstein wuru ya site na 1694 ruo 1702.
Salzburg Trinity Church ime
Isi ọnụ ụlọ oval na-achịkwa ìhè nke na-enwu site na windo semicircular dị n'elu ebe ịchụàjà bụ isi, nke kewara n'ime obere akụkụ anọ, nke a na-ekewakwa obere akụkụ anọ ahụ n'ime ihe a na-akpọ slug pane na nkwụghachi mmanụ aṅụ. Ebe ịchụàjà dị elu sitere na nhazi nke Johann Bernhard Fischer von Erlach. Ngwongwo nke ebe ịchụàjà bụ aedicula, ihe owuwu mabul nwere pilasters na oghere mgbanaka nwere akụkụ dị larịị. Atọ n'Ime Otu dị nsọ na ndị mmụọ ozi abụọ na-asọpụrụ bụ ndị e gosiri dị ka otu rọba.
A na-etinye pulpit nke nwere obe onye nkwusa n'ime niche mgbidi dị n'aka nri. Pews dị na mgbidi diagonal anọ na ala marble, nke nwere ụkpụrụ nke na-emesi oval nke ụlọ ahụ ike. Na crypt bụ sarcophagus nke nwere obi onye na-ewu ụlọ Prince Archbishop Johann Ernst Count Thun na Hohenstein dabere na nhazi nke Johann Bernhard Fischer von Erlach.
Linzer Gasse, elongated isi okporo ụzọ nke ochie obodo Salzburg na nri akụ nke Salzach, na-eduga na-ebili si Platzl na Schallmoserstraße na ntụziaka nke Vienna. N'oge na-adịghị mgbe mmalite nke Linzer Gasse na elu nke Stefan-Zweig-Platz ọnụ ụzọ ámá Francis dị n'aka nri, n'ebe ndịda, n'akụkụ nke Linzer Gasse. Ọnụ ụzọ Francis bụ ụzọ dị elu nke nwere ọnụ ụzọ 2 nke nwere nnukwu ọnụ ụzọ ámá nke dabara na Stefan-Zweig-Weg ruo n'ọdụ ụgbọ mmiri Francis wee gaa n'ebe obibi ndị mọnk Capuchin na Capuzinerberg. Na crest nke archway ka e nwere katrij ndị agha a kpụrụ akpụ nwere uwe agha nke Count Markus Sittikus nke Hohenems, site na 1612 ruo 1619 onye isi bishọp nke archfoundation Salzburg, onye wuru ọnụ ụzọ ámá Francis. N'elu katrij ndị agha bụ ihe enyemaka nke mkparị nke HL. E gosipụtara Francis n'ịkpụgharị ihe na-afụ ụfụ, site na 1617.
Ọta imi na Linzer Gasse Salzburg
Ihe a na-elekwasị anya na foto a na-ese na Linzer Gasse bụ na brackets ígwè arụpụtara, nke a makwaara dị ka ọta imi. Ndị na-akpụ akpụ na-eji ígwè eme ọta imi aka kemgbe oge ochie. A na-adọta uche na nka a kpọsara site na iji akara dịka igodo. Guilds bụ ụlọ ọrụ ndị omenkà emebere n'oge emepechabeghị anya iji chebe ọdịmma ọha.
Ime ụlọ ụka Sebastian
Na Linzer Gasse no. 41 e nwere Nzukọ-nsọ ​​Sebastians nke dị na akụkụ ndịda-ọwụwa anyanwụ ogologo ya na ụlọ elu facade ya kwekọrọ na Linzer Gasse. Ụka St. Sebastian nke mbụ malitere na 1505-1512. E wughachiri ya site na 1749-1753. Ebe ịchụàjà dị elu dị n'akụkụ apse ahụ eweghachitere nwere ihe owuwu mabul dị ntakịrị nke nwere ùkwù pilasters, ogidi abụọ ewepụtara, kwụ ọtọ cranked entablature na oke olu. Na n'etiti a akpụrụ akpụ na Mary na nwa si gburugburu 1610. N'ihe odide e nwere a enyemaka nke Saint Sebastian si 1964.
Ebe a na-eli ozu Portal Sebastian Salzburg
Ịbanye n'ili Sebastian site na Linzer Straße dị n'etiti ndị ukwe nke Sebastian Church na Altstadthotel Amadeus. Portal arch semicircular, nke dị n'akụkụ pilasters, entablature na n'elu site na 1600 nwere nnukwu agba agba, nke nwere uwe ogwe aka nke onye nchoputa na onye wuru, Prince Archbishop Wolf Dietrich.
Ebe ili ozu Sebastian
Ebe ili ozu Sebastian jikọtara na ugwu-ọdịda anyanwụ nke Ụka Sebastian. Ewubere ya site na 1595-1600 n'aha Prince Archbishop Wolf Dietrich n'ọnọdụ ebe a na-eli ozu nke dị kemgbe mmalite nke narị afọ nke 16, nke e mere na Italian Campi Santi. Camposanto, Ịtali maka "ubi dị nsọ", bụ aha Ịtali maka ogige ụlọ dị ka ebe a na-eli ozu gbachiri emechi nke nwere okporo ụzọ mepere emepe n'ime. Ebe a na-eli ozu Sebastian dị n'akụkụ niile site na ogidi ogidi gbara ya gburugburu. A na-ekpuchi ebe a na-adọba ụgbọala na oghere ukwu n'etiti eriri mgbachi.
Mozart ili Salzburg
N'ọhịa nke ebe a na-eli ozu Sebastian n'akụkụ okporo ụzọ a na-aga n'ebe a na-ekpo ọkụ, onye na-anụ ọkụ n'obi Mozart bụ Johann Evangelist Engl nwere ihe ngosi ili wuru nke nwere ili ezinụlọ Nissen. Georg Nikolaus Nissen lụrụ nke abụọ na Constanze, bụ́ nwanyị di ya nwụrụ, Mozart. Nna Mozart Leopold Otú ọ dị, e liri ya na nke a na-akpọ ili obodo na nọmba 83, taa bụ ili Eggersche dị n'akụkụ ebe ndịda nke ebe a na-eli ozu. Wolfgang Amadeus Mozart ka edoro na St. Marx na Vienna, nne ya na Saint-Eustache na Paris na nwanne Nannerl na St. Peter na Salzburg.
Munich Kindl nke Salzburg
N'akụkụ nkuku ụlọ ahụ dị n'akụkụ akuku Dreifaltigkeitsgasse / Linzer Gasse, nke a na-akpọ "Münchner Hof", a na-ejikọta ihe ọkpụkpụ na nsọtụ na-apụta na ala mbụ, na-egosi onye mọnk mara mma nke nwere ogwe aka elu, aka ekpe na-ejide akwụkwọ. Uwe agha nke Munich bụ onye mọnk na-ejide akwụkwọ iyi n'aka ekpe ya, na-aṅụ iyi n'aka nri. A na-akpọ uwe agha Munich ka Münchner Kindl. Münchner Hof guzoro ebe ebe ezumike kacha ochie na Salzburg, "Goldenes Kreuz-Wirtshaus", guzoro.
Salzach dị na Salzburg
Salzach na-asọga n'ebe ugwu banye n'ime ụlọ ezumike. Ọ bụ aha ya bụ mbupu nnu na-arụ ọrụ n'osimiri ahụ. Nnu sitere na Hallein Dürrnberg bụ isi ihe kacha mkpa maka ndị bishọp achị Salzburg. Salzach na Inn na-agba ọsọ n'ókè ya na Bavaria ebe enwerekwa nkwụnye nnu na Berchtesgaden. Ọnọdụ abụọ ahụ jikọtara ọnụ bụ ntọala maka esemokwu dị n'etiti Archbishọp nke Salzburg na Bavaria, bụ nke ruru njedebe ha na 1611 site na ọrụ nke Berchtesgaden site n'aka Onyeisi Archbishọp Wolf Dietrich. N’ihi ya, Maximilian I, bụ́ Duke nke Bavaria, weghaara Salzburg ma manye Prince Archbishọp Wolf Dietrich ịgbahapụ.
Ụlọ elu nke Salzburg Town Hall Tower
Site na arch nke ime obodo, ị ga-abanye n'ime nnukwu ọnụ ụlọ obodo. Na njedebe nke ụlọ nzukọ obodo, ụlọ elu nke ụlọ nzukọ obodo na-eguzo n'akụkụ akụkụ nke rococo facade nke ụlọ ahụ. Nnukwu ndị pilasters gbapụrụ ụlọ elu nke nnukwu ọnụ ụlọ obodo ochie n'elu cornice nwere pilasters nkuku. N'elu ụlọ elu ahụ, e nwere obere ụlọ elu mgbịrịgba hexagonal nwere ọtụtụ akụkụ. Ụlọ elu mgbịrịgba nwere mgbịrịgba abụọ dị nta sitere na narị afọ nke 14 na nke 16 na nnukwu mgbịrịgba sitere na narị afọ nke 20. Na Middle Ages, ndị bi na-adabere na mgbịrịgba, n'ihi na a na-agbakwunye elekere ụlọ elu na narị afọ nke 18. Mgbịrịgba ahụ mere ka ndị bi na ya nwee mmetụta nke oge ma na-akụ ma ọ bụrụ na ọkụ na-agba.
Alte Markt bụ akụkụ anọ nwere akụkụ anọ metụrụ n'akụkụ dị warara nke ugwu n'akụkụ okporo ụzọ Kranzlmarkt-Judengasse na nke na-agbasawanye n'ụdị akụkụ akụkụ anọ na ndịda wee meghee ruo ebe obibi. A na-eji ahịrị mechiri emechi nke mara mma, ụlọ nwere ụlọ nwere okpukpu 5 ruo 6, nke ọtụtụ n'ime ha bụ oge ochie ma ọ bụ site na narị afọ nke 16 kpuchiri ámá ahụ. Ụlọ ndị ahụ bụ akụkụ 3- ruo 4-, akụkụ 6- ruo 8-axis ma na-enwekarị windo ihe mgbochi akụkụ anọ na mkpuchi profaịlụ.
Ikike nke facade dị gịrịgịrị plastered nwere oghere windo kwụ ọtọ, ihe ndozi ụdị slab ma ọ bụ ihe ndozi siri ike sitere na narị afọ nke 19 bụ ihe na-ekpebi njirimara nke oghere. Ụdị slab nke Josephine ji ụlọ ndị dị mfe dị na ala ịta ahịhịa mee ihe, bụ́ ndị gbazeworo usoro tectonic ka ọ bụrụ n'ígwé nke mgbidi na mbadamba. Na n'etiti chiri anya square na Alter Markt guzo mbụ ahịa iyi, nsọ na St. Florian, na a Floriani kọlụm n'etiti isi iyi.
Ewubere olulu mmiri octagonal nke e ji mabụ Untersberg mee n'afọ 1488 n'ọnọdụ olulu mmiri ochie mgbe arụchara ọkpọkọ mmiri ọṅụṅụ site na Gersberg n'elu àkwà mmiri obodo gaa n'ahịa ochie. The ornate, na-ese spiral grille na isi iyi malite na 1583, tendrils nke na-ejedebe na grotesques mere nke mpempe akwụkwọ metal, ibexes, nnụnụ, ndị na-agba ịnyịnya na isi.
Alte Markt bụ akụkụ anọ nwere akụkụ anọ metụrụ n'akụkụ dị warara nke ugwu n'akụkụ okporo ụzọ Kranzlmarkt-Judengasse na nke na-agbasawanye n'ụdị akụkụ anọ na ndịda wee meghee chere ebe obibi ahụ.
A na-eji ahịrị mechiri emechi nke mara mma, ụlọ nwere ụlọ nwere okpukpu 5 ruo 6, nke ọtụtụ n'ime ha bụ oge ochie ma ọ bụ site na narị afọ nke 16 kpuchiri ámá ahụ. Ụlọ ndị ahụ bụ akụkụ 3- ruo 4-, akụkụ 6- ruo 8-axis ma na-enwekarị windo ihe mgbochi akụkụ anọ na mkpuchi profaịlụ.
Ikike nke facade dị gịrịgịrị plastered nwere oghere windo kwụ ọtọ, ihe ndozi ụdị slab ma ọ bụ ihe ndozi siri ike sitere na narị afọ nke 19 bụ ihe na-ekpebi njirimara nke oghere. Ụdị slab nke Josephine ji ụlọ ndị dị mfe dị na ala ịta ahịhịa mee ihe, bụ́ ndị gbazeworo usoro tectonic ka ọ bụrụ n'ígwé nke mgbidi na mbadamba. A na-eji eriri pilasta chọọ mgbidi ụlọ ndị ahụ mma kama ịbụ nnukwu ogidi.
Na n'etiti chiri anya square na Alter Markt guzo mbụ ahịa iyi, nsọ na St. Florian, na a Floriani kọlụm n'etiti isi iyi. Ewubere olulu mmiri octagonal nke e ji mabụ Untersberg mee na 1488 n'ọnọdụ ebe a na-ese ihe ochie mgbe arụchara ọkpọkọ mmiri ọṅụṅụ site na Gersberg n'elu àkwà mmiri obodo gaa n'ahịa ochie. Gersberg dị na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ n'etiti Gaisberg na Kühberg, nke dị n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ nke Gaisberg. The ornate, na-ese spiral grille na isi iyi malite na 1583, tendrils nke na-ejedebe na grotesques mere nke mpempe akwụkwọ metal, ibexes, nnụnụ, ndị na-agba ịnyịnya na isi.
Na ọkwa nke Florianibrunnen, n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke square, n'ime ụlọ ọ dịghị. 6, bụ ụlọ ahịa ụlọ ọgwụ ochie nke Prince-Archbishop tọrọ ntọala na 1591 n'ime ụlọ nwere okpokolo agba nke baroque n'oge na elu ụlọ nwere oke ụda sitere na etiti narị afọ nke 18.
Ụlọ ahịa ọgwụ ochie nke onyeisi-archbishop dị n'ala nwere ụlọ ahịa 3-axis n'ihu site na gburugburu 1903. Ụlọ ahịa ọgwụ echekwara, ụlọ ọrụ nke ụlọ ahịa ọgwụ, na shelves, tebụl ndenye yana arịa na ngwaọrụ sitere na narị afọ nke 18 bụ Rococo. . Nke ahịa ọgwụ dị na mbụ na ụlọ agbataobi no.7 ma bufee ya naanị na ebe ọ dị ugbu a, ụlọ no. Ọnwa Iri na Abụọ 6, 1903.
Kafe Tomaselli na Alter Markt No. 9 na Salzburg e hiwere na 1700. Ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha ochie na Austria. Enyere Johann Fontaine, onye si France bịa, inye chọkọleti, tii na kọfị n'ime Goldgasse dị nso. Mgbe Fontaine nwụsịrị, kọfị kọfị gbanwere aka ọtụtụ ugboro. Na 1753, Anton Staiger, onye isi ụlọikpe nke Archbishop Siegmund III weghaara ụlọ kọfị Engelhardsche. Gụọ Schrattenbach. Na 1764 Anton Staiger zụtara "Abraham Zillnerische obibi na nkuku nke ochie ahịa", ụlọ nwere a 3-axis facade chere ihu na Alter Markt na a 4-axis facade chere ihu Churfürststrasse na e nyere na sloping ala n'ala mgbidi na. windo okpokolo agba gburugburu 1800. Staiger tụgharịrị ụlọ kọfị ka ọ bụrụ ntọala mara mma maka klaasị elu. Ndị òtù ezinụlọ Mozart na Haydn na-agakwa aga Kafe Tomaselli. Carl Tomaselli zụtara ụlọ oriri na ọṅụṅụ na 1852 wee mepee kiosk Tomaselli chere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na 1859. Otto Prossinger gbakwunyere ihe owuwu ụzọ mbata na 1937/38. Mgbe Agha Ụwa nke Abụọ gasịrị, ndị America na-arụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'okpuru aha Forty Second Street Café.
Ihe ncheta Mozart nke Ludwig M. Schwanthaler
Ludwig Michael von Schwanthaler, nwa ikpeazụ nke ezinụlọ Upper Austrian ọkpụ Schwanthaler, kere ihe ncheta Mozart na 1841 na emume nke afọ 50 nke Wolfgang Amadeus Mozart nwụrụ. Ihe ọkpụkpụ ọla dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita atọ n'ịdị elu, nke Johann Baptist Stiglmaier, onye nduzi nke ebe a na-ahụ maka ọla ndị eze na Munich, rụrụ na Septemba 4, 1842 na Salzburg n'etiti ebe bụ Michaeler-Platz n'oge ahụ.
Ihe osise ọla kọpa nke oge gboo na-egosi Mozart nọ n'ọnọdụ contrapostal uwe mwụda na uwe nke oge a, stylus, mpempe egwu (mpịakọta) na okpu laurel. Amụma ndị e gburu dị ka ihe mgbaka ọla kọpa na-anọchi anya ọrụ Mozart na ngalaba ụlọ ụka, egwu egwu na ụlọ yana opera. Emebere Mozartplatz nke taa na 1588 site n'ịkwatu ụlọ dị iche iche nke obodo n'okpuru Onyeisi Archbishọp Wolf Dietrich von Raitenau. Ụlọ Mozartplatz 1 bụ ebe a na-akpọ New Residence, nke Salzburg Museum dị. Ihe oyiyi Mozart bụ otu n'ime akwụkwọ ozi akwụkwọ ozi ama ama na obodo ochie Salzburg.
Drum Dome nke Kollegienkirche na Salzburg
N'azụ ebe obibi, drum dome nke Salzburg Collegiate Church, nke e wuru na mpaghara Mahadum Paris Lodron site na 1696 ruo 1707 site na Prince Archbishop Johann Ernst Graf von Thun na Hohenstein dabere na atụmatụ nke Johann Bernhard Fischer von Erlach n'okpuru nlekọta nke A na-ekewa mason aster ụlọ ikpe Johann Grabner n'akụkụ octagonal site na ogwe abụọ.
N'akụkụ dome drum ahụ, e nwere ụlọ elu ụlọ elu nke Chọọchị Collegiate, nke dị n'akụkụ akụkụ nke ị nwere ike ịhụ ihe oyiyi. A na-etinye lantern, ihe arụrụ arụ ọrụ okirikiri, n'elu dome drum dị n'elu anya dome. Na ụlọ ụka Baroque, oriọna na-emekarị ka njedebe nke dome na-anọchi anya isi iyi dị mkpa nke ìhè ehihie.
Ebe obibi Square Salzburg
Onye isi Bishọp Wolf Dietrich von Raitenau mere Residenzplatz site n'iwepụ ahịrị ụlọ ndị dị na Aschhof gburugburu 1590, obere square dabara na nnukwu ụlọ Hypo taa na Residenzplatz, nke kpuchiri ihe dịka 1,500 m², na ebe ili ozu katidral, nke dị n'ebe ugwu. Katidral dị. Dị ka onye na-anọchi anya katidral na-eli ozu, e kere Sebastian na-eli ozu n'akụkụ St. Sebastian's chọọchị dị n'akụkụ aka nri nke obodo ochie.
N'akụkụ Aschhof na n'akụkụ ụlọ ndị obodo, mgbidi siri ike gbara gburugburu ebe a na-eli ozu katidral n'oge ahụ, mgbidi nnukwu ụlọ, nke na-anọchi anya ókè n'etiti obodo ndị isi na obodo. Wolf Dietrich mekwara ka mgbidi a laghachi azụ n'akụkụ katidral na 1593. Otú a ka e si emepụta square dị n'ihu ebe obibi ochie na nke ọhụrụ, nke a na-akpọkwa square square.
Ụlọ ikpe Arches na-ejikọta Katidral Square na Franziskaner Gasse
Ihe a na-akpọ Wallistrakt, nke taa nwere akụkụ nke Mahadum Paris-Lodron, na 1622 site n'aka Prince Archbishop Paris Count von Lodron. Aha ụlọ ahụ Wallistrakt sitere na Maria Franziska Countess Wallis bi.
Akụkụ kacha ochie na traktị Wallis bụ ụlọ a na-akpọ okpuru ulo nke nwere facade nwere okpukpu atọ nke mebere mgbidi ọdịda anyanwụ nke ogige Katidral ahụ. A na-ekewa ụlọ ahịa ahụ site na okpukpu abụọ dị larịị, nke nwere plastered kehoraizin nke windo nọdụ na ya. A na-emesi facade ahụ dị larịị ike kwụ ọtọ site na pilasters nkuku gbajiri agbaji na anyụike windo.
Nnukwu ala nke ụlọ mgbaka ụlọikpe dị n'ala nke abụọ. N'ebe ugwu, ọ gbara n'akụkụ akụkụ ndịda nke ebe obibi, na ndịda, na Archabbey nke St. Peter. N'ebe ndịda nke ụlọ ikpe ụlọikpe e nwere Museum St. Peter, akụkụ nke DomQuartier Museum. Ụlọ Wolf Dietrich Prince-Archbishop dị n'akụkụ ebe ndịda nke ụlọ ụlọikpe ahụ.
Arcades ndị ahụ bụ ọnụ ụlọ ogidi nwere okpukpu atọ nwere okpukpu abụọ nke e wuru na 3 n'okpuru Onyeisi Archbishọp Wolf Dietrich von Raitenau. Oghere ogige ahụ jikọtara Domplatz na axis Franziskanergasse Hofstallgasse, nke na-aga n'ụzọ ziri ezi na facade nke katidral wee wuchaa ya na 2.
Site n'okirikiri ogige ahụ, mmadụ si n'ebe ọdịda anyanwụ banye n'ihu ụlọ ụka katidral, dị ka a ga-asị na ọ bụ n'ọgba mmeri. The "porta triumphalis", nke e bu n'obi na mbụ imeghe na ise arches na katidral square, na-ekere òkè na njedebe nke onye isi-archbishop usoro.
Edobere Katidral Salzburg nsọ na hl. Rupert na Virgil. A na-eme ememe nkwado na Septemba 24th, ụbọchị St. Rupert. Katidral Salzburg bụ ụlọ Baroque nke Prince Archbishop Paris Count von Lodron mebere na 1628.
Ngafe ahụ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ, akụkụ ihu nke katidral ahụ. N'elu ebe a na-agafe bụ 71 mita elu dome nke katidral nke nwere pilasters nkuku na windo akụkụ anọ. Na dome e nwere frescoes asatọ nwere ihe ngosi sitere na agba ochie na ahịrị abụọ. Ihe nkiri ndị ahụ metụtara ihe nkiri nke Mmasị nke Kraịst n'ime ụlọ. N'etiti ahịrị nke frescoes bụ ahịrị nwere windo. Enwere ike ịhụ ihe nnọchianya nke ndị ozi ọma anọ ahụ n'elu akụkụ nke dome.
N'elu ogidi ndị na-agafe agafe, e nwere pendants trapezoidal iji gbanwee site na atụmatụ ala square nke ngafe gaa na octagonal drum. Dome ahụ nwere ọdịdị nke ebe obibi ndị mọnk, nke nwere elu gbagọrọ agbagọ nke na-adịwanye warara n'elu n'elu isi octagonal nke drum n'akụkụ nke ọ bụla nke polygon. Na etiti vertex e nwere ihe owuwu na-emeghe n'elu dome anya, oriọna, nke Mmụọ Nsọ dị ka nduru. Ngafe ahụ na-enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkụ niile sitere na lantern dome.
Na Salzburg Katidral n'ime otu-nave ukwe ìhè na-enwu, n'ime nke a na-emikpu n'ime ebe ịchụàjà dị elu nke na-enweghị onwe ya, ihe owuwu nke e ji nkume marble mee na pilasters na ihe gbagọrọ agbagọ, nke a na-afụ ụfụ, na-emikpu. A na-eji ụda olu dị elu na caryatids kpuchie elu ebe ịchụàjà ahụ dị elu nke nwere gable triangular fụrụ afụ. Ogwe ebe ịchụàjà na-egosi mbilite n’ọnwụ nke Kraịst na Hll. Rupert na Virgil n'akwụkwọ akụkọ ahụ. Na mensa, tebụl nke ebe ịchụàjà, e nwere reliquary nke St. Rupert na Virgil. Rupert hiwere St. Peter, ebe obibi ndị mọnk mbụ nke Austria, Virgil bụ abbot nke St. Peter ma wuo katidral mbụ na Salzburg.
Oghere mmiri nke Katidral Salzburg dị okpukpu anọ. Isi ọdụ ụgbọ mmiri na-esonyere n'akụkụ abụọ site n'ahịrị nke ụlọ ekpere na oratorios n'elu. A na-ahazi mgbidi ahụ site na pilasters okpukpu abụọ n'usoro buru ibu, nwere ogwe dị larịị na isi ihe mejupụtara ya. N'elu pilasters, e nwere oghere okirikiri, nke gbanyere mkpọrọgwụ nke oghere gbọmgbọm nwere eriri abụọ dabere na ya.
Akpụkpọ anụ bụ ihe osise nke cornice kwụ ọtọ n'akụkụ mwepu mgbidi kwụ ọtọ, na-adọkpụrụ cornice n'elu akụkụ na-apụta. Aghọtara okwu ahụ entablature pụtara n'ozuzu nke ihe arụrụ arụ n'elu ogidi.
N'ime ime ụlọ dị n'etiti pilaster na entablature, e nwere nnukwu ebe a na-adọba ụgbọala, mbara ihu ndị na-apụ apụ na-ezu ike na consoles volute na ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ abụọ. Oratorios, obere ọnụ ụlọ ekpere dị iche iche, dị ka osisi dị na gallery nke ọdụ ụgbọ mmiri ma nwee ọnụ ụzọ nke nnukwu ọnụ ụlọ. Okwu ọnụ anaghị emeghe ọha na eze, mana edobere ya maka otu ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ ndị ụkọchukwu, ndị otu n'usoro, otu ụmụnna ma ọ bụ ndị kwere ekwe ama ama.
Otu ogwe aka ntụgharị nke otu oghere na ndị ukwe na-ejikọta na yok akụkụ anọ na ngafe square na ọkara okirikiri. Na conche, semicircular apse, nke ukwe, 2 n'ime ala windo 3 jikọtara ya na pilasters. Ntugharị gaa na ngafe nke isi ọdụ ụgbọ mmiri, ogwe aka transverse na ukwe na-egbochi site na ọtụtụ ọkwa pilasters.
The trikonchos na-ejuju na ìhè mgbe nave bụ na ọkara-ọchịchịrị n'ihi na nanị na-apụta ìhè ọkụ. N'ụzọ dị iche na a n'ala atụmatụ dị ka a Latin cross, nke a ogologo nave na-agafe ebe a na-agafe n'akụkụ aka nri site n'otu aka ahụ ogologo transept, na atọ conch ukwe, trikonchos, atọ conches, ntụgharị semicircular apses nke otu size. , n'akụkụ nke a square dị ka a set nke ọ bụla ọzọ nke mere na ala atụmatụ nwere udi nke a klova akwukwo.
White stucco na predominantly ornamental motifs na oji na undercuts na ịda mbà n'obi na-achọ festoons, ihe ịchọ mma ele si n'okpuru nke arches, chapel ụzọ na mgbidi zones n'etiti pilasters. Stucco na-agbatị n'elu ihe mkpuchi ahụ yana frieze dị nro wee mepụta usoro nke ubi geometric nwere okpokolo agba jikọtara chiri anya na oghere n'etiti kọlụm. Ala nke katidral ahụ nwere Untersberger na-egbuke egbuke na marble Adnet na-acha uhie uhie.
Ebe e wusiri ike nke Salzburg
Ebe e wusiri ike Hohensalzburg dị na Festungsberg n'elu obodo ochie nke Salzburg. Ọ bụ Archbishọp Gebhard, onye arụrụ arụ nke Archdiocese Salzburg wuru ya, n'ihe dị ka afọ 1077 ka obí Romanesque nke nwere mgbidi gbara okirikiri gburugburu ugwu ahụ. Archbishọp Gebhard na-arụsi ọrụ ike na ụlọ ụka ụlọikpe nke Emperor Heinrich III, 1017 - 1056, Roman-German King, Emperor na Duke nke Bavaria. Na 1060 ọ bịara Salzburg dị ka achịbishọp. O tinyere onwe ya na nhazi nke diocese Gurk (1072) na ebe obibi ndị mọnk Benedictine Admont (1074).
Site na 1077 gaa n'ihu ọ ga-anọrịrị na Swabia na Saxony maka afọ 9, n'ihi na mgbe ntinye na ịchụpụ nke Henry IV, ọ sonyeere eze na-emegide Rudolf von Rheinfelden na enweghị ike ikwu onwe ya megide Heinrich IV. n'ime archbishọp ya. Ihe dị ka 1500 ebe obibi dị n'okpuru Archbishọp Leonhard von Keutschach, onye na-achị absolutist na nepotist, bụ nke a rụrụ nke ọma ma gbasaa ebe ewusiri ike ka ọ dị ugbu a. Naanị nnọchibido nke ebe e wusiri ike na-enweghị ihe ịga nke ọma mere na Agha Ndị Ala Ala na 1525. Ebe ọ bụ na achịbisiri ike nke archbishọp na 1803, ebe e wusiri ike nke Hohensalzburg dị n'aka steeti ahụ.
Salzburg Kapitel Horse ọdọ mmiri
Ugbua na Middle Ages e nwere "Rosstümpel" na Kapitelplatz, n'oge ahụ ka n'etiti square. N'okpuru Prince Archbishọp Leopold Freiherr von Firmian, nwa nwanne nke Prince Archbishop Johann Ernst Graf von Thun na Hohenstein, e wuru ogige cruciform ọhụrụ nke nwere nkuku gbagọrọ agbagọ na balustrade na 1732 dịka atụmatụ nke Franz Anton Danreiter, onye isi nyocha nke Salzburg. ogige ogige.
Ịnweta maka ịnyịnya na mmiri mmiri na-eduga ozugbo na otu ihe ọkpụkpụ, nke na-egosi chi oké osimiri Neptune na trident na okpueze na-agba mmiri na-agba mmiri na 2 mmiri-souting tritons n'akụkụ, ngwakọ e kere eke, ọkara nke nke. mejupụtara ahụ mmadụ elu na azụ dị ka ahụ dị ala nke nwere ọdụ ọdụ, na niche Round arch niche na aedicle na pilaster abụọ, ogologo entablature na agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba. Ọkpụkpụ nke Salzburg bụ Josef Anton Pfaffiner mere ihe ọkpụkpụ nke baroque, bụ onye mekwara isi iyi Floriani na Alter Markt. N'elu ihe nkiri ahụ bụ chronogram, ihe odide na Latin, nke mkpụrụedemede ukwu pụtara na-enye nọmba otu afọ dị ka ọnụọgụgụ, nke nwere uwe aka a kpụrụ akpụ nke Prince Archbishop Leopold Freiherr von Firmian na ubi gable.
Ebe obibi Hercules Fountain Salzburg
Otu n'ime ihe mbụ ị na-ahụ mgbe ị na-abanye n'ogige ụlọ ochie nke Residenzplatz bụ grotto niche nwere isi iyi na Hercules na-egbu dragọn ahụ n'okpuru arcades nke ọdịda anyanwụ. Ihe ngosi Hercules bụ ihe ncheta nke nka Baroque nyere ikike nke ejiri mee ihe dị ka usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Hercules bụ dike a ma ama maka ike ya, ihe atụ sitere na akụkọ ifo ndị Gris. Okpukpe ndị dike ahụ rụrụ ọrụ dị mkpa maka steeti ahụ, n'ihi na mkpesa nke ọnụ ọgụgụ dị iche iche nke Chineke nọchiri anya ihe ziri ezi ma kwe nkwa nchebe Chineke.
Ngosipụta ogbugbu nke Hercules gburu dragọn ahụ gbadoro ụkwụ na atụmatụ nke Onyeisi Archbishọp Wolf Dietrich von Raitenau, onye nwere ebe obibi ọhụrụ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Katidral ahụ wughachiri ya na ebe obibi achịbishọp n'ezie dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke Katidral ahụ wughachikwara ya nke ukwuu.
Ụlọ ọgbakọ ogbako Salzburg obibi
Hieronymus Graf von Colloredo, onye ikpeazụ Salzburg onyeisi achịbishọp tupu secularization na 1803, nwere mgbidi nke steeti ọnụ ụlọ nke ebe obibi mma na ezi ihe ịchọ mma na-acha ọcha na ọla edo site plasterer Court Peter Pflauder dị ka classicist uto nke oge.
stovu oge ochie echedoro echedoro site na 1770s na 1780s. N'afọ 1803, a gbanwere archbishọp ka ọ bụrụ ọchịchị ụwa. Site na ntughari gaa n'ụlọikpe eze ukwu, ndị ezinaụlọ eze Austria ji ebe obibi ahụ dịka ebe obibi nke abụọ. Ndị Habsburg ji arịa ụlọ sitere na Hofimmobiliendepot were rụọ ụlọ steeti ahụ.
Ụlọ ogbako na-achịkwa ọkụ eletrik nke 2 chandeliers, nke e bu n'obi mee ya na kandụl, na-ekokwasị n'uko ụlọ. Chamdeliers bụ ihe ndị na-enwu ọkụ, nke a na-akpọkwa "Luster" na Austria, nke na-eji ọtụtụ isi iyi ọkụ na iko mee ka ọkụ na-emepụta ihe ọkụ ọkụ. A na-ejikarị chandelier eme ihe maka nnọchite anya n'ụlọ ezumezu.